Kooxda Al-Shabaab oo ‘la wareegtay’ deegaan ku yaalla dalka Kenya. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
by admin 4th December 2019 4th December 2019 0128
Sidoo kale Al shabaab ayaa sheegatay inay saanad Milatari ka soo qaadatay saldhigga ciidamada Kenya ee deegaanka Dhicise, sida ay hadalka u dhigtay.
kooxda ayaa howlgal ay ka fuliyeen dhulka NFD ee gummeysiga kujira waxay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Dhicise oo dhaca duleedka degmada Gaarisa, ciidamada saliibiyiinta Kenya ayaa isaga firxaday deegaanka kadib markii ay ubabac dhigi waayeen gulufka Mujaahidiinta” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.” ayaa lagu yiri war rasmi ah oo ka soo baxay dhaq dhaqaaqa Al-Shabaab.
Dilka Gudoomiye kuxigeenka Sh/hoose oo dad badan loosoo qabtay
Daawo Muuqaal: Maxaadan ogeyn oo Shalay ka furmay Magaalada Kismaayo Xili aad loo….
DEG DEG: Qarax xoogan oo goordhaw ka dhacay agagaarka guriga madaxweynihii hore ee soomalia iyo qasaaro ka dhashay